QM iyo Turkiga oo ka hadlay hagaajinta xiriir Soomaaliya iyo Kenya | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya - Qaramada Midoobey iyo Turkiga ayaa si isku mid ah usoo dhaweeyay soo celinta cilaaqaadka Kenya iyo Soomaaliya oo lixdii bilood ee lasoo dhaafey gaarey meeshii ugu xumayd.
Antonio Guterres, oo ah xoghayaha Guud ee QM ayaa qoraal uu soo saarey ku sheegay inuu bogaadinayo doorka Qatar, isagoo hoosta ka xariiqay inuu ka rajaynayo Soomaaliya iyo Kenya inay xoojiyaan xiriirkooda iyo iskaashigii ka dhaxeeyay, oo sida uu xusay muhiim u ah xasiloonida gobolka Geeska Afrika.
Si taas lamid ah, dowladda Turkiga ayaa usoo dhaweysay go'aanka labada dal ay caadi ugu soo celiyeen xiririka diblomaasi, waxaana lagu booriyay hogaamiyeyaasha labada dal inay si isagu soo celiyaan safiirada.
"Waxaan soo dhoweyneynaa horumarada la xiriira dib u soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. Waxaan bogaadinaynaa dadaalka dowladda Qatar ay ku bixisay howshan," ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga.
Labada dal ee Geeska Afrika dhaca waxaa ka dhexeeyey khilaaf diblomaasiyadeed oo curyaamiyay Nabadgelyada, Waxbarashada iyo xiriirka Ganacsi, iyadoo DF joojisay Qaadka.